Kiisaska Barnevern-ka - Qareen lacag la´aan ah ayaad xaq u leedahay - NorSom News
Nala soo xiriir/Kontakt oss
Kiisaska Barnevern-ka – Qareen lacag la´aan ah ayaad xaq u leedahay
Nagala soo xiriir: 45970350 ama post@scolaw.no,
Makula soo xiriireen ama kiis makaa soo galay hey´adda barnevernka?
Waxaa noo shaqeeyo qareeno khibrad dheer u leh arimaha barnevernka, waxaana caawinaa qoysas badan oo soomaali ah.
Nala soo xiriir, waxaan ku siineynaa talo bixin xaga sharciga ah oo free ah. 24 saac gudahood Ayaan balan kuugu sameyn doonaa.
Xusuuso mar walba inaad xaq u leedahay:
Waxaad mar walba xaq u leedahay qareen lacag la´aan ah, hadii kiis uu kaasoo galo hey´adda caruurta Ama caruurtaada lagaala wareego xanaanadooda.
Barnevernka waxaa waajib ku ah inay ku caawiyaan, kuna siiyaan talo, ku tusaan habka korinta saxda ah, koorsooyiin iyo caawinta kale aad u baahantahay. Waa prosses dheer oo u baahan fahan guud iyo la socosho joogto ah oo dhow.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad fahanto qaabka ay u shaqeeyaan, waxa aad xaqa u leedahay iyo sida ugu fiican ee aad kiiskaaga u muujin karto. Waxaan soo caawinay waalidiin badan oo soomaali ah, wax badan ayaana ka ognahay dhibaatada xaga fahanka ah ee kala heysata barnevernka iyo qoysaska soomaalida ah.
Waxaan kula socon doonaa inta uusan kiisku furmin, inta uu socdo iyo marka uu dhamaado intaba.
Ilaa 10 kiis oo barnevernka ka dhan ah, ayaa hada yaalo maxkamada xuquuqul insaanka Yurub ee Strasbourg. Waxaana marar badan hey´adda lagu eedeeyay qaabka ay uga shaqeeyaan ama u turjumaan xeerarka sharciga caruurta.
Nagala soo xiriir: Kontakt oss på 45970350 ama post@scolaw.no, si aad u hesho caawinta sharciyeed ee ku saabsan barnevernka. Ama si aad u hesho jawaabta su´aasha maskaxdaada kujirto.
Waxaa noo shaqeeyo shaqaale ku hadlo af soomaali iyo carabi.
Waxaan xafiis ku leenahay magaalooyinka Oslo, Bergen,Stavanger, Sarsborg iyo Drammen. Xafiiskeena guud waxa uu kuyaalaa, Dronningens gate 8 A, 0152 Oslo.
Booqo webkeena: Scolaw.no
Previous articleWasiirka cadaalada: Sharciyada Qoxootiga ee Australia, wax badan ayaa laga baran karaa.
Next articleDaawo SNTV: Norway oo Soomaaliya u saxiixday fulinta mashruuc muhiim ah.
Ilhaan Cumar oo weerarkii ugu cuslaa ku qaaday Trump
W.A Dibadda oo ku talineyso inaan dalka laga bixin ilaa january sanadka danbe.
Boqor Harald oo isbitaalka la dhigay: neefta ayaa culeys ku noqotay.
Adeega xawaalada casriga ah ee PayQuick: Gurigaaga lacagta ka dir.
Juba Travel Agency
Nagala soco barteena Facebooga
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (48) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Kategorier Velg kategori Covid-19 Doorashada 2017 Norway Fikrado Forsiden Meninger Meninger/Fikrado News in other languages NorSom Magazin Nyheter/Warcusub Økonimi/Dhaqaale Politikk/siyaasad sport Utdanning/Waxbarasho Vedio/Muuqaalo Wararka caalamka
© NorSom News-Xuquuqdu wey dhowrantantahay
error: Digniin: Ha isku dayin in copy gareyso wararka aan daabacno. Waan kula soconaa.